Free DNS प्रयोग गरि बढाऔं इन्टरनेटको स्पिड - Nepali Virals
३१ भाद्र २०६९, आईतवार २२:२९	539 पटक-पढिएको
इन्टरनेट चलाउनेहरुको लागि सनातन समस्या हो त्यसको स्पिड। विदेशको अवस्था जे भएपनि नेपालमा इन्टरनेट चलाउनेले सुस्तो डाउनलोड र अपलोडको हैरानी भोग्नु परिरहेको छ। द्रूत स्पिडका भनेका इन्टरनेट आम पहुँचमा छैन। एक घण्टामै सयौं रुपैंया सक्ने गरि इन्टरनेट चलाउने कुरा पनि भएन। सस्तोमा राम्रै स्पिड भएको भनेको नेपाल टेलिकमको एडीएसएल हो त्यसको स्पिडको कुनै भर छैन। कतिखेर हृवात्तै अपलोड अनि डाउनलोड हुन्छ। कतिखेर इन्टरनेटको लाइन नै। केबल र वाइफाइको अवस्था पनि त्यस्तै नै छ। १० १२ जनालाई सेयर गरेको हुन्छ त्यसैले स्पिडमा इन्टरनेट चलाउने भनेको मध्यरातमा मात्र हो। इन्टरनेटको स्पिड कम भएर हैरान हुनुभएकाहरुका लागि केही उपाय छन् इन्टरनेट स्पिड बढाउनका लागि। ती मध्येको एक हो Free DNS को प्रयोग। विभिन्न प्रख्यात वेब सेवा दिने कम्पनीहरुले Free DNS प्रयोगको सुविधा दिएका छन्, जसको प्रयोगले तपाइँको इन्टरनेटको स्पिडलाई बढाउन सकिन्छ। त्यसका लागि यि Free DNS को प्रयोग गर्नुहोस्।
1. Google DNS : –
2. Open DNS :-
3. Norton DNS :-
4. Scrub IT :-
5. DNS Advantage :-
यदी तपाइँ विन्डोज एक्सपी चलाउनुहुन्छ भने कम्प्युटरको होम स्क्रिनमा रहेको स्टार्टमा जानुस् त्यसपछि My Network Placesमा जानुस। त्यसपछि View Network Connections मा। त्यहाँ रहेका Wireless Network Connection वा Local Area Connection मध्ये एकमा Right Click गरि Properties मा क्लिक गरि देखिने विण्डोमा Internet Protocol (TCP/IP) मा जानुहोस्। जहाँ क्लिक गरेपछि तल देखिने Properties मा जानुहोस् जहाँ नयाँ विण्डोमा Obtain DNS server address automatically र Use the following DNS server addresses भन्ने देखिन्छ। त्यसमध्ये Use the following DNS server addresses मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि देखिने खाली ठाउँमा माथिका पाँच मध्ये कुनै पनि Free DNS राख्नुहोस्। त्यसपछि अनुभव गर्नुहुनेछ इन्टरनेटको स्पिड बढेको।
यदी एक्सपी नभएर विण्डोज सेभेन चलाउनु भएको छ भने। कम्प्युटरको होम स्क्रिनको Start मा किलक गरि कन्ट्रोल प्यानलबाट Network and Internet त्यसपछि View Network Status and Tasks र Network and Sharing Center मा जानुहोस्। त्यसपछि Local Area Connection वा Wireless Network Connection मा क्लिक गरेर त्यसमा देखिने विण्डोको Properties मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि खुल्ने विण्डोमा देखिने Internet Protocol Version4(TCP/IPv4) मा क्लिक गर्नुहोस् जहाँको Properties मा क्लिक गरी Obtain DNS server address automatically र Use the following DNS server addresses मध्ये Use the following DNS server addresses छानि खाली ठाउँमा यी 8.8.8.8 र 8.8.4.4 नम्बर हाल्नुहोस्। त्यसपछि ओके र सेभ गरेर इन्टरनेटको स्पिड बढेको अनुभव गर्नुहोस्।
अघिल्लो यी वेबसाइट हेरेर हाँस्नुस्
पछिल्लो यहाँबाट राखौं सन्तानको नाम
सेप 17, 2012 at 10:30 अपराह्न
Really useful concept..thanks…
सेप 17, 2012 at 11:59 अपराह्न
नेपाल भन्दा बाहिर रहेका DNS सरभर पर्योग गर्दा ति सरभर एक्सेस गर्नै पनि समय लाग्ने भयो। Name resolution हुन अझअरु समय लाग्छ। यसरी local dns खो साटो बाहिरको DNS सरभर प्रयोग गर्द इन्टेरनेटको गति छिटो हुनेमा शंकै छ।
सेप 18, 2012 at 5:13 बिहान
मैले स्पिड केही बढेको अनुभव गरें
सेप 18, 2012 at 7:34 अपराह्न
DNS भनेको कुन वेबसाइट कुन IP सँग सम्बन्धित छ, भन्ने कुरा पत्ता लगाएर, user लै उनीहरुले चाहेको वेबसाइट खोल्ने काम मात्र हो | यसले इन्टरनेट स्पिडमा खासै तेस्तो केहि पनि गर्दैन
Madan Maniलाई जवाफ दिनुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्